Mpitsara 21 - Ny Baiboly
Mpitsara toko 21
Fananganana ny fokon'i Benjamina indray.
1Tany Masfà nianiana ny lehilahy amin'Israely nanao hoe: Tsy hisy hanome ny zanany vavy ho vadin'ny Benjamita isika. 2Nankany Betela ny vahoaka, ka nitoetra tao izy eo anatrehan'ny Tompo mandra-paharivan'ny andro. Nanandratra ny feony nitomany mafy dia mafy izy, 3nanao hoe: Iaveh Andriamanitr'Israely ô, ahoana re no nahatonga izao amin'Israely; fa fongotra androany ity ny fokon'Israely iray. 4Nony ampitso nifoha maraina koa ny vahoaka dia nanorina otely teo, ka nanolotra sorona dorana sy sorom-pihavanana. 5Ary hoy ny zanak'Israely: Iza amin'ny fokon'Israely rehetra no tsy niakatra namonjy ny fiangonana teo anatrehan'ny Tompo? Fa efa nisy voady natao am-pahibemaso, namely an'izay tsy hiakatra hankany amin'ny Tompo any Masfà manao hoe: Hohelohin-ko faty izy. 6Nalahelo an'i Benjamina rahalahiny ny zanak'Israely, ka nanao hoe: Ny foko iray no fongotra amin'Israely androany. 7Inona re no hataontsika ho azy, mba hahazoan'ireo sisa vady? Fa isika efa nianiana tamin'ny Tompo tsy hanome ny zanatsika ho vadin'izy ireo. 8Dia hoy izy: Moa misy, na dia anankiray aza, amin'ny fokon'Israely, tsy mba niakatra nankany amin'ny Tompo tany Masfà? Ary indro, ny tamin'i Jabesy any Galaada, no tsy mba nisy tonga tao an-taoby amin'ny fiangonana. 9Fa nisaina ny olona ary indro fa tsy nisy tao ny mponina ao Jabesy any Galaada, na dia iray aza. 10Koa naniraka lehilahy roa arivo sy iray alina anisan'ny mahery hamely azy ny fiangonana, ary nomeny didy hoe: Mandehana asio amin'ny lelan-tsabatra ny mponina any Jabesy any Galaada, mbamin'ny vehivavy sy ny ankizy. 11Izao no hataonareo: ataovy anatema ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra efa nandry tamin-dehilahy. 12Dia nahita zazavavy virjiny efa-jato tsy mbola nahalala lahy fa tsy nandry tamin-dehilahy izy ireo, teo amin'ny mponina any Jabesy, any Galaada, ka nentiny nankany an-toby tany Silao izay any amin'ny tany Kanaana. 13Ary ny fiangonana rehetra nandefa iraka hiteny amin'ny taranak'i Benjamina, tany amin'ny haram-baton'i Remona sy hanambara ny fihavanana amin'izy ireo. 14Dia niverina ny Benjamita tamin'izany andro izany ka nomena azy ireo ny vehivavy navela ho velona tamin'ny vehivavy tany Jabesy, any Galaada, nefa tsy ampy hahenina azy ireo.
15Nalahelo an'i Benjamina ny vahoaka, fa efa nanabangan'ny Tompo iray ny fokon'Israely. 16Ary hoy ny loholon'ny fiangonana: Inona no hataontsika hahazoan'ireo sisa vady; fa efa ringana ny vehivavy tamin'i Benjamina? 17Dia hoy izy ireo: Ny lovan'ireo afa-nandositra dia oka ho raikitra fa an'i Benjamina ihany, mba tsy ho voafongotra amin'Israely ny foko iray. 18Fa isika tsy mahazo manome amin'ny zanatsika ho vadin'izy ireo, satria efa nianiana ny zanak'Israely nanao hoe: Ho voaovona anie izay manome ny zanany vavy ho vadin'ny Benjamita. 19Dia hoy izy hoe: Indro misy fetin'ny Tompo ankalazaina isan-taona any Silao ilay tanàna ao avarat'i Betela, atsinanan'ny làlana miakatra avy any Betela ho any Sikema ary atsimon'i Libàna, 20ka nomeny didy ny tarana'i Benjamina, nataony hoe: Mandehana hianareo, manao otrika ao amin'ny tanim-boaloboka, 21dia jereo, ka nony injay mivoaka hiara-mandihy ny zazavavin'i Silao, dia mivoaha avy ao an-tanim-boaloboka, ka samia hianareo misambotra izay ho vadinareo amin'ny zazavavin'i Silao, dia handeha hankany amin'ny tanin'i Benjamina indray. 22Ary raha tonga mitaraina aminay ny rainy na ny anadahiny dia izao no holazainay aminy: Mba avelao ho anay izy fa tsy nahazo vady ho azy tsirairay avy izahay, tamin'ny ady. Sady tsy hianareo no nanome azy ho azy ireo, fa raha izany no meloka hianareo. 23Dia nataon'ny taranak'i Benjamina izany, samy naka vady ho azy tamin'ny mpandihy nosamboriny, araka ny isany, izy ireo; ary niainga hody amin'ny lovany, dia nanorina ny tanànany indray sy nonina teo izy.
24Tamin'izany andro izany dia niala teo ny tanak'Israely, samy ho any amin'ny fokony sy ny fianakaviany; samy nody avy eo ho any amin'ny lovany avy. 25Tsy nisy mpanjaka teo amin'Israely tamin'izany andro izany, fa samy nanao izay hitany fa tsara. >